Mwepụ Malware nke ọma: Nduzi si na akwa
A haziri nduzi a iji nyere gị aka ikpochapụ malware site na usoro nwere nje ma ọ bụrụ na ọ nwere ike buutụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-eche na malware nke bu oria ngwaọrụ gị bụ Crypto (Cryptolocker, TeslaCrypt, wdg) mgbe ahụ ntụziaka a abụghị maka gị. Ị data dị n'ihe ize ndụ na ị ga-etinye post n'ọnọdụ. Ọ bụrụ na kọmputa gị adịghị ike ịkwalite dịka nsonaazụ nke malware, a gwara gị ka ị rụọ ọrụ ebe ọ bụ na ntụziaka a agaghị abụ enyemaka - sun palace casino bonus.
Ọ bụrụ na ịmee usoro ndị a, nke ọkachamara nke Semalt , Julia Vashneva nyere, ị ga-enwe ike idozi nsogbu gị n'ihe karịrị pasent 90 nke ihe ngosi. Nke ahụ kwuru, mmepụta nke ụdị malware niile abụghị ụdị ya, n'otu ụdị ahụ, atụmatụ nke ngwaọrụ mgbapụta virus abụghị otu.
Ntụziaka ndị na-esonụ bụ naanị ndụmọdụ. Ị bụ onye ọ bụla maka ọ bụla ị na-ahọrọ iji mebie na kọmputa gị. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ị nwere ike imebi ọrụ gị ma ọ bụ nwee nsogbu data na ikpe ị kpebiri ịgbaso nduzi a. Ya mere, a gwara gị ka ịdebe data gị tupu ị gbaso nduzi a.
Nzọụkwụ maka Malware Remediation
Ị ga-ebu ụzọ gaa nkwụnye ihe nchọgharị gị wee wepu ihe niile na-enyo enyo. Chetakwa iji wepụ ebe obibi obibi na ihe nchọgharị.
Ibudata ma wụnye ihe ndị na-esonụ n'usoro a. Kpochapụ ngwaọrụ niile ọ gwụla ma e kwuru ya. Gbaa mbọ hụ na ị nọ n'ọnọdụ nkịtị mgbe ị na-agba ọsọ ngwaọrụ.
I Kwesịrị Ịkwụsị SKIP NTỤKWU NDỊ KWESỊRỊ KWESỊRỊ MGBE M GA-EME NTỤRỤ NTHE MGBE A GA-EKWU ỤLỌ
1. Igbu [rkill.com]. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga-ewe nkeji ole na ole iji gwụchaa..
2. Na-agbakwunye otu Malwarebytes 3.0 ruo taa. Gbanwee na "Nyocha maka Rootkits" ọzọ wee mechaa nyocha.
3. Iji "nhọrọ nyochaa na-eme Malwarebytes ADWCleaner wee pịa" nhicha "mgbe ịmechara ma kwe ka ọ malitegharịa usoro gị.
4. Wụnye Malwarebytes Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ Malwarebytes ma kwe ka ọ mezue. Malitegharịa ekwentị gị ugboro ugboro.
5. Wụnye Sophos HitmanPro
Kedu ihe bụ nkọwa nke Malware?
Malware na okwu na-agwakọta nke na-ezo aka n'ụdị dịgasị iche iche nke mmegide ngwa gụnyere mgbagwoju kọmputa, nje, Ransomware, adware, scareware, na ngwa ọjọọ ndị ọzọ.
Kedu ka kọmputa m si bute?
Ọ bụ ihe ịma aka iji chọpụta ihe kpatara ọrịa ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, onye ọrụ ahụ na-ekwe ka ọrịa na-agba ọsọ na amaghi.
Otu esi echebe maka oria ojoo:
Ghọta ihe ị na-ebudata ma na-agba ọsọ na usoro gị. Mmemme nkwalite dị ka Flash na Java site na iji saịtị ọrụ ha. Ngwaọrụ ndị a ga - enyere gị aka ihicha kọmputa gị:
Antivirus na-enweghị ụgwọ
ESET Free Scanner Online
Ngwaọrụ dị mkpa:
uBlock Orig Nchọgharị Mgbati
Achọpụtara ụzọ ndị a tụrụ aro na nduzi a n'ihi oke mmeri ha nke dị elu na-ekpebisi ike n'ọtụtụ buru ibu. Ma, n'ọnọdụ ụfọdụ, ịgbaso usoro ndị a nwere ike ọ gaghị ezu. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịrịọ enyemaka dị elu.